प्राध्यापक झा ट्वासको ‘फेलो’ चयन- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
४६ वर्षदेखि प्राध्यापनरत उनी वनस्पति र पर्यावरणको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक इमिरेट्स डा. पीके झा ‘द वर्ल्ड एकेडेमी अफ साइन्सेस (ट्वास)’ को ‘फेलो’ (सदस्य) चयन भएका छन् ।
वनस्पति र बोट–बिरुवाको अध्ययन–अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै उनलाई ट्वासको १–४ नोभेम्बरमा सम्पन्न १५ औं महासभाले फेलो चयन गरेको हो । ट्वास सन् १९८३ मा पाकिस्तानका भौतिकशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुस सलामको संयोजकत्वमा स्थापना भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । स्थापना कालमा ९ नोबेल पुरस्कार विजेतासहित ४२ जना फेलो रहेको ट्वासमा हाल संसारका सय वटा मुलुकका नामी वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू आबद्ध छन् ।
यसले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, युवा वैज्ञानिकहरूको प्रवद्र्धन, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहयोग गर्दै आएको छ । बर्सेनि यसले ६ सयभन्दा बढीलाई विद्यावारिधि र ‘पोस्टडक’ अध्ययनका लागि अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विभिन्न अनुसन्धान वृत्ति र पुरस्कारसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । युनेस्कोले ट्वासलाई एउटा वैज्ञानिक इकाईका रूपमा मान्यता दिँदै सञ्चालन खर्च व्यहोर्दै आएको छ भने इटाली सरकारले पनि यसलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ट्वासको फेलोहरू यसका साधारण सदस्य जस्तै मानिन्छन्, जसको चयन अन्य ट्वास फेलोहरूले क्षेत्रगत योगदानका आधारमा गर्छन् ।
प्राध्यापक झा बोटबिरुवा, वनस्पति–पानी सम्बन्ध, बीउबिजनको अनुसन्धान, पर्यावरण, जुडिबुटी, जलवायु परिवर्तन र असर, जैविक विविधता, मिचाहा झारलगायतको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अनुसन्धानरत छन् । हालसम्म ११ जना विद्यार्थीलाई पीएचडी गराएका प्राध्यापक झाका २ सय ५० भन्दा बढी अनुसन्धानात्मक आलेखहरू प्रकाशित छन् । ४६ वर्षदेखि प्राध्यापनरत उनी नास्टका प्राज्ञसमेत हुन् । ट्वासले फेलो चयन गरेकामा खुसी देखिएका उनले जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनीसहित ३१ मुलुकबाट ५८ जना वैज्ञानिक/अनुसन्धानकर्ताहरूलाई ट्वासले फेलो चयन गरेको हो । थपिएकासँगै ट्वासमा फेलो संख्या १ हजार ३ सय ४३ पुगेको छ । ट्वासका फेलोहरूले वार्षिक सभामा सहभागिता जनाउने, अनुसन्धानात्मक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विज्ञको राय प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा चयन हुने भएकाले एक पटक ट्वास फेलो चयन भएपछि त्यो आजीवन मान्यता रहन्छ ।
ट्वासले विज्ञानका विभिन्न १० विधामा फेलो चयन गर्दै आएको छ । झालाई बायोलोजिक सिस्टम्स् एन्ड अर्गानिज्म्सन्तर्गतको विधामा छनोट गरिएको हो । हालसम्म ट्वासमा नेपालबाट प्रा.डा. बिन्दु लोहनी, प्रा.डा. विशाल उप्रेती, प्राध्यापक इमिरेट्स डा. रामप्रसाद चौधरी चयन भएका छन् । प्रा.डा. लोहनी एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने उप्रेती त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका पूर्वडिन हुन् । भूगर्भविद्समेत रहेका उप्रेती हाल ट्वासको काउन्सिल मेम्बरसमेत छन् । प्रा.डा. चौधरी भने वनस्पतिविद् हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ १६:२९
सुनचाँदी व्यवसायमा फर्कियो रौनकता, तिहारको ४ दिनमै १६० किलो सुन बिक्यो
कार्तिक २४, २०७८ राजु चौधरी
काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण झण्डै दुई वर्षसम्म शिथिल अवस्थामा पुगेको सुनचाँदी व्यवसायमा यतिबेला भने रौनकता बढेको छ । व्यवसायीका अनुसार गत वर्ष लकडाउनले दसैंतिहारमा सुनचाँदीको व्यापार भएन । लकडाउन खुल्दा पनि बजार सुस्त नै रह्यो । यो तिहारमा भने कोभिड अघिकै अवस्था फर्किएकोमा व्यवसायी उत्साहित छन् ।
‘गत वर्ष धेरै समस्या भयो । व्यवसायी धेरै चिन्तित थिए,’ जे.जे ज्वलर्सका सञ्चालक पवनकुमार समानीले भने, ‘यसपालिको तिहारमा व्यवसाय धेरै राम्रो, सुखद भयो ।’ गत वर्षको तुलनामा यस पटक ३५ प्रतिशत व्यापार बढेको उनले सुनाए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका समानीले न्यूरोड क्षेत्रमा व्यापार धेरै राम्रो भएको बताए ।
व्यवसायीका अनुसार यसपटक सुनको मुल्यले पनि साथ दिएको हो । गत वर्ष कात्तिकमा प्रतितोला ९५ हजारदेखि ९८ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य यसपटक करिब ९२ हजार रुपैयाँको वरिपरि रह्यो । जसले गर्दा पनि ग्राहकको चाप बढेको समानीले बताए । महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यका अनुसार तिहारको मुख्यत ४ दिनमा मुलुकभर दैनिक औसत ४० किलो सुन बिक्री भयो । धनतेरसकै दिनमा भने करिब ५० किलो भन्दा बढी सुन बिक्री भएको शाक्यले बताए । ‘तिहारका ४ दिन मात्रै करिब १ सय ६० किलो सुन बिक्री भएको छ । यो परिमाण अत्यन्त राम्रो हो,’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘बिक्री भएको परिमाण गत वर्षसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’
प्रतितोला सुनको मूल्य ९२ हजार रुपैयाँको दरले एक किलो सुनको मूल्य करिब ८० लाख रुपैयाँ हुन्छ । १ सय ६० किलो सुनको मुल्य करिब १ अर्ब २८ करोड पर्छ । शाक्यका अनुसार तिहारमा चाँदी पनि उत्साहजनक रुपमा बिक्री भएको छ । धनतेरसमा सुन चाँदीको सानो सिक्का भएपनि किन्ने र लक्ष्मीपूजाको दिन पूजा गर्ने प्रचलन छ । जसले गर्दा धनतेरसकै दिन व्यापार अधिक हुन्छ ।
‘४ दिनमा चाँदी औसत दैनिक १५ सय किलो बिक्री भयो । धनतेरसको दिनमा २ हजार किलो बिक्री भएको अनुमान छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भने । चाँदी तोलाको १२ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । उक्त दर अनुसार एक किलो चाँदीको मूल्य १ लाख ७ हजार पर्छ । ६ हजार किलो चाँदीको मूल्य करिब ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ । ‘यसपटकको तिहारमा देशैभरका व्यवसायी उत्साहित भए, आशा गरेजस्तै व्यापार भयो,’ उनले भने । धनतेरस मुख्यत: भारतमा मनाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि उत्साहजनक रुपमा मनाइँदै आएको छ । लक्ष्मीपूजा गर्नकै लागि सर्वसाधरणले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सुनचाँदीका गहना, सिक्का, मूर्तिहरु खरिद गर्छन् । व्यवसायीका अनुसार सुनचाँदीको सिक्का बढी बिक्री हुन्छ । चाँदीको भाँडा, करुवा, प्लेटदेखि माना/पाथी मापक बनाएर समेत बिक्री हुन्छ । कलश, कचौरा, दियो सबै प्रकारका भाँडाको माग बढ्ने महासंघले जनाएको छ ।
तिहार सकिएपछि सुनचाँदी बजारमा ग्राहकको भिड पनि कम भएको व्यवसायी बताउँछन् । मंसिर लागेपछि भने व्यापार पुन बढ्नेमा उनीहरु आशाबादी छन । ‘मंसिर बिहेको सिजन भएकाले सुनको माग फेरि बढ्ने अनुमान गरेका छौँ,’ अध्यक्ष शाक्यले भने । नेपालमा सुन दुबई, हङकङ र स्विजरल्यान्डबाट बढी आयात हुन्छ । सुन वाणिज्य बैंकहरुले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सुन कोटा प्रणालीबाट वितरण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक आयातित कोटा २० किलो तोकेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको सुन आयात भएको छ । तीन महिनामा सुन आयातका लागि बाहिरिएको यो रकम हालसम्मकै उच्च हो ।
प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७८ १६:२४